क्वारेन्टीन नियम पालना नगर्नेे ७ विदेशीलाई कोरियालेे गर्यो देश निकाला – Eps Sathi
February 5, 2021 829
कोरोना भाइरस फैलिएसँगै दक्षिण कोरियामा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिएको छ। तर नोभेम्बर यता नियम पालना नगर्ने ७ जना विदेशीहरुलाई कोरियाले उनिहरुकै देश फिर्ता पठाइदिएको छ। कोरियाको न्याय मन्त्रालयले बिहिबार भनेको छ सन् २०२० को नोभेम्बर महिनायता क्वारेन्टीन नियम उल्लङ्घन गर्ने ७ जना बिदेशीलाई देश बाट निकाला गरिएको छ भने १४ जनालाई जरिवाना तिराइएको छ।
देश फर्काइएका मध्ये एक जना इन्डोनेशियाका पानीजहाज चालक दलका सदस्य थिए। उनि गत डिसेम्बर १७ तारिख इन्छन अन्तराष्ट्रिय विमास्थलमा आएका थिए। उनलाई सरकारले उपलब्ध गराएको क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको थियो। तर ति मानिस एयरपोर्टको सौचालयमा गई लुगा फेरेर ट्याक्सि चढि फरार भएका थिए। उनलाई कोरियाका प्रहरीले १ हप्तापछी गिरफ्तार गर्न सफल भइ स्वदेश फर्काइदिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार गत अप्रिलदेखि अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्ने नियम लागु भइसकेपछि कोरियाबाट यो नियम उल्लङघन गर्ने ६८ जनालाई कोरियाबाट निकालिएको छ। कोरियाले लागू गरेको २ हप्ते क्वारेन्टीन बस्न नमान्ने ८१ जना अरु मानिसलाई कोरियाले इन्छन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको छ।
कोरियाको नियमअनुसार विदेशबाट आउने सबैले अनिवार्य १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नैपर्दछ। यो नियम कोरियन तथा विदेशी सबैले अनिवार्य कि त आफ्नै घर वा यो सुविधा भएको कुनै पनि ठाउँमा बस्न सक्दछन्। एकदमै आकस्मिक अवस्था जस्तै इमेरजन्सी बिरामी भएर सेल्फ क्वारेन्टिन नियम उल्लङघन गर्ने विदेशीहरुलाई भने जरिवाना तिराइ कोरियामै बस्न दिइएको कोरियाको न्याय मन्त्रालयले बताएको छ।
न्याय मन्त्रालयले नियम उल्लङ्घन गरेमा अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुने समेत बताएको छ। त्यसैगरि सम्पूर्ण विदेशीहरुलाई सामाजिक दूरीका नियमहरु अनिवार्य पालना गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। आउँदै गरेको कोरियाको नयाँ बर्ष सलनालमा विशेष गरि विदेशीहरु जमघट हुने स्थानहरुमा सुक्ष्म निगरानि राखिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
Prevकुन बैंकबाट सेयर भर्दा कति शुल्क लाग्छ?
Nextप्रतिकित्ता रु १२० मा आइपिओ निष्काशनका लागि रुरु जलविध्युतले पायो अनुमति
कतिले भरे आजसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ? अझै २ दिन बाँकी
कोरिया प्रवेशमा सहज, विदेशमा खोप लगाएकाहरु अब कोरियामा क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने
खुशीको खबर, कोरियामा ७० प्रतिशले लगाए खो’पको पूरा डोज, कोरोना सं’क्रमण पनि घट्दो
कोरियामा खिसुक्सामा ढोका नलगाई सुत्दा कम्पनीको खोङजाङनिम छिरेर…. (10005)